Farmaajo oo maanta wajigabax kala kulmay Beesha Habargedir: Maxaa ka soo baxay kulankii maanta? (Warbixin Buuxda) | SMC
Home WARARKA MAANTA Farmaajo oo maanta wajigabax kala kulmay Beesha Habargedir: Maxaa ka soo baxay...
Farmaajo oo maanta wajigabax kala kulmay Beesha Habargedir: Maxaa ka soo baxay kulankii maanta? (Warbixin Buuxda)
Madaxweyne Farmaajo oo mudo ka badan sanad raadinayay in mar uun la kulmo beesha Habargedir ayaa ugu danbeeyntii fursad u helay maanta in uu la kulmo hogaanka dhaqanka ee beesha Habargedir.>
Kulanka maanta ayaa waxaa beesha Habargedir uga qayb-galay 25 xubnood oo uu hogaaminaayay Gudoomiyaha Gudiga Beesha Abukar Ganeey iyo ku xigeenadiisa. Kulanka waxaa kaloo goobjoog ka ahaa qaarka ka mida Wasiirada iyo Xildhibaanada beesha Habargedir ee la shaqaysta Farmaajo.
Kulanka markii uu furmay ayaa hogaanka beesha Habargedir waxa ay u sheegtay Farmaajo in uu isaga hadalka furo oo uu sheego beesha sababta uu ugu yeeray madaama isaga codsiga ka yimid. Farmaajo ayaa sheegay in uu beesha uu ugu yeeray sadax qodob 1) In la wadatashado 2) in uu warbixin ka siiyo beesha xaaalada siyaasadeed ee dalku marayo iyo 3) Xal u helida arimaha Galmudug.
Farmaajo oo ujeedada uu ka lahaa shirka ahayd in uu ku qanciyo Hogaanka Dhaqanka Beesha Habargedir in ay qayb ka noqdaan qorshaha uu doonayo in uu MW Xaaf ku ceyriyo isla markaana qof isaga uu wato uu keensado. Nuxurka hadalkiisa ayaa ahaa in uu doonayo in uu doorasho u qabto dadka reer Galmudug bisha soo socoto inta aan la qaban doorashadana dadka reer Galmudug loo qabto waxa uu ku sheegay dib-u-heshiisiin. Waxa uuna beesha ka codsaday in ay hormuud ka noqdaan barjaamijkiisa.
Markii Farmaajo dhamaystay hadalkiisa oo intiisa badan ka muuqday isdhexyaac iyo isku toosnaan la’aan oo marba meel uu ku dhufanayay ayaa waxa hadalka la wareegay beesha Habargedir oo inta ayan imaan shirka ka hor ku soo heshiisay odoyaasha u hadlaya iyo qodobada ay kala hadlayaan Farmaajo. Odoyaasha ayaa soo xushay sadax qof oo kaliya in ay u hadasho beesha isla markaana ka jawaabaan su’aalaha Farmaajo.
Gudoomiyaha Gudiga Beesha ayaa isaga oo ku hadlaya magac beesha waxa uu u sheegay Farmaajo in ay soo dhaweeynayaan wadatashiga laakiin ayan hadda uga baahnaynin Madaxweynaha in uu waqti badan ku lumiyo ka hadalka xaalada dalku marayo, sababta oo ah qofkastaa oo jooga shirkan waa ay aragtaa kana warheysaa in dalkii god ku dhacay waxau baahan in laga hadlaana ay tahay sidii godka looga soo saari lahaa.
Godobta Farmaajo ka galay beesha Habargedir
Gudoomiyaha ayaa u sheegay Farmaajo in xukuumadiisa ay godob ka gashay beesha Habargedir guud ahaanteed, waxa uuna tusaale u soo qaatay; balan ka baxyadii iyo jariimooyinkii beesha loo geystay oo uu isagu hogaanka u hayay.
Waxaa sidoo kale loo sheegay Farmaajo in ciidan uu isaga soo amray ay weerar ku qaadeen dad shacab ah oo ku nool magaalada Muqadishu. Dagaalkaa lagu qaaday beesha waxaa hogaaminaayay Ciidanka Booliska iyo Wasiiro ka mida Golaha Wasiirada oo uu horkacayay Cabdullahi Godax Barre.
Farmaajo ayaa loo sheegay in magalaada Muqadishu ay kala xirantahay iyada oo ciidamo isku horfadhiyaan qaybo ka mida magaalada. Waxaa kaloo loo sheegay in beesha Habargedir isdifaacday isna difaaci doonto. “beeshu wax ay diyaar u tahay in sharci ah lagu kala baxo oo dadka cadaalad lagula dhaqmo laakiin ma jirayso cid ogolaanayso in awood dowladeed lagu colaadiyo beelo gaar ah, mudo ayaan aamusnayn, dulqaadkiina waa naga dhamaaday”. ayuu yiri Gudoomiyaha.
Odoyaasha dhaqanka waxa ay u sheegeen Madaxweyne Farmaajo in beesha ay horay u magacaawday gudi xaqiiqo raadis ah oo ku maqan degaanka Galmudug marka gudigaas soo dhamaystaan baaritaankooda ayaana go’aan laga gaari doonaa qaabka loo wajahayo arinta Galmudug. Beesha ayaa si farsamaysan oo asluubaysan ugu sheegtay Madaxweyne Farmaajo in ayan qayb ka noqonaynin barnaamjikiisa u gaarka ah, hadii uu isku dayo in uu ku dhaqaaqana uu kala kulmi doono cawaaqib xumo iyo fashil.
Farmaajo maxuu yiri?
Farmaajo oo ka jawaabaya eedihii loo soo jeediyay ayaa waxa uu dusha eeda ka saaray xukuumada , isaga oo sheegay in uusan war u haynin weerarka lagu qaaday dadka degan degaanka Jaamacada. Waxa uu yiri “…aniga ma soo amrin, ma aqaan meesha laga soo amray, anigana raali kama ihi weerarakaas”. Hadalkaan ayaa fajac ku noqday odoyaashii shirka ka soo qaybgalay. Sidee bay suuragal ku tahay in Farmaajo uusan la socon dhibkii loo gaystay dadka ku dhaqan koonfurta Muqadishu?.
Odoyaasha Dhaqanka ayaa hadalka ka soo yeeray Farmaajo u arkay in uu yahay mid uu eeda dusha ka saarayo Xassan Cali Kheyre madaama ciidanka weerarka soo qaaday laga soo amray xafiiska Ra’iisal Wasaaraha.
Dhanka kala Farmaajo ayaa odoyaasha waxa uu ka codsaday in ay maanta jawaab ka siiyaan inta ayan ka bixin madaxtooyada in ay taageerayaan qorshahiisa la xiriira Galmudug. Odoyaasha ayaa marka kale hadalka ku noqday waxa ayna u sheegeen in beesha ay iyada go’aan ka gaarayso sida loo xalinayo arinta Galmudug, xalkaasna waxa uu imaanayaa marka gudiga xaqiiqa raadiska ay ku soo noqdaan magaalada Muqadishu.
Farmaajo oo ujeedadiisu ahayd in u odoyaasha ka helo ogololaasho uu dagaal beeleed kaga abuuro Galmudug ayaa waxa uu kala kulmay kulankii maanta wajigabax iyo ceeb iyada oo loo muujiyay in aan raali laga ahaynin qorshahiisa iyo doorashada uu doonayo in uu ka qabto Galmudug.
Oday ka mida odoyaasha maanta ka qayb galay kulanka oo la hadlay MOL ayaa yiri “ ..aniga maanta ayaa iigu horeysay Farmaajo oo aan waligay horfariisto ama aan la kulmo laakiin waxa aan maqli jiray maanta ayay ii cadaatay…. Waxaana aan qirayaa in ninkaas yahay nin waalan oo u baahan in dalka laga qabto”. Waa uu intaas ku daray “waligeey ma arag nin ka codsanayo hogaan beeleed in ay qayb ka noqdaan burburinta degaankooda….ilayn ninku maba fiyoobo”.
Oday ka mida odoyaasha dhaqanka ee ka soo jeeda degaanka Shabeelada Hoose ayaa isna yiri “ujeedada uu noogu yeeray maanta waxa ay ahay Galmudug inta kale waa qiic isku qaris iyadiina waa uu ku fashilmay” Waxa uu intaas raaciyay “…walee beeshu waa ay ku saxnayd in ay diido la kulankiisa .. Soomaali ilaah baa u maqan”.
Previous articleDAAWO: GUDIGA JOOGTADA BAARLAMAANKA OO MAANTA KU DHAWAAQEY ARIMO MUHIM AH
Next articleFarmaajo oo u sheegay beelaha degan Muqadisho in dhibka ka jira caasimadda uu mas’uul ka yahay Kheyre! (Xog)